Iguazu, Las Cataratas del Iguazú - Puerto Iguazu
South America Argentina Puerto Iguazu
Cinwaanka: Misiones Gobolka, Argentina
Telefoon: +54 3757 49 1469
Dhererka ka sarreeya heerka badda: 195 m
Qalabka ugu sareeya: 82 m
Tirada marxaladaha: 275
Dherer: 82 m
Jid: 2700 m
Isticmaalka biyaha: 1500-6000 m3 / s
Iguazu Falls waxay ku taallaa webiga isla, taas oo, marka laga reebo xudduudaha Brazil iyo Argentina . Iguazu - mid ka mid ah biyaha ugu weyn ee qaaradda. Waxay ka kooban tahay 275 weyn oo aan biyuhu ahayn, taas oo soo jiidasho leh quruxdiisa.
Ka jawaabidda su'aasha, meesha khariidada adduunka iyo mida lafaha ah waa Iguazu Falls, ogow: calaamadda Argentina ee ku taala bartamaha Galbeed, dhulka Koonfurta Ameerika.
Magaca dhirku wuxuu ka yimid luqada Guarani, dadka Hindida ah ee Koonfurta Ameerika, waxayna u tarjumaysaa "biyo wayn". Sida laga soo xigtay halyeeyga, waxaa jiray hal ilaah oo qorsheeyay in uu guursado dhimasho qurux badan. Magaceedu wuxuu ahaa Naipi, laakiin aroosadda ayaa si lama filaan ah ula carartay lover. Tani waxay sababtay cadhada ilaahnimada. Wuxuu u kala qaybiyey hal wabiga weyn ee biyaha yar yar wuxuuna ku tuuray laba qof oo jecel midkood. Qabiilada Kiingang iyo Guarani waxay rumeysnaayeen in Iguazu Falls loo sameeyay sidaas.
Cilmi-baaraha ugu horreeya ee biyaha waa Cabeza de Vaca. Sannadkii 1541 wuxuu ku duubay xusuusqoradiisa, isagoo tilmaamaya biyaha, sida wax cajiib ah.
Miyuu ka mid yahay kan webiga ee Iguazu Falls?
Iguazu Falls waa 4 km oo ballaaran oo ku yaala isugeyntii webiga, 30 km u jirta isku dhafka Parana, oo ah webiga labaad ee ugu dheer qaaradan.
Biyaha badankood ee Iguazu waxay ku yaallaan dhulka Argentina iyo sidoo kale qaabab wareegsan - "dhuunta Ibliiska", sida ay naanaysteen dadweynaha deegaanka.
Tilmaamaha iyo sawirada quruxda cajiibka ah ee Iguazu Falls ee Argentina
Biyaha hoose ee Iguaçu Falls waxay ku kulmayaan canyon, ka dibna waxay u gudubtaa webiga Parana kor ku xusan. Waterfalls waa kala soocaan jasiiradaha, waxayna ku xiran yihiin habab dhowr ah. Tani waxaa loo sameeyey si sahlan ee dalxiisayaasha kuwaas oo had iyo jeer doonaya inay arkaan sida ugu xiisaha badan.
Heerka dhererka Iguazu waa 900 m. Wareegga guud ee dhismaha oo dhan waa ilaa 3 km, dhererka biyuhu wuxuu gaarayaa 83 m.
Iguazu waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Aan ka fogayn Iguazu Falls waa jilayaal kale oo Argentina ah - bariga Itaipu iyo macbadyada Jesuit. Waxaa lagu soo booqan karaa iyadoo dhowr jeer dalxiiso dhowr jeer ah.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Iguazu Falls
Maxaa kale oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato dhirta, halkan ku socda dalxiis:
Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu booqashada badan ee qaaradda, taas oo aan la yaab leh. Sannad kasta qiyaastii 2 milyan oo booqdayaashu waxay yimaadaan calaamadda. Iibmu waxay u soo iibsatay Iguazu, ogow in lagu siin doono roobab, waxaanay hogaamin doonaan oo kaliya ma'aha goobaha wax lagu daawado, laakiin sidoo kale cagtu waa biyaha.
Biyaha ayaa ka soo jeeda Beerta Qaranka ee Iguazu oo ku yaal xudduudaha Argentina iyo Brazil, sababtoo ah waxay ku yaalliin dhulkeeda.
Heerka Iguazu wuxuu ka sarreeyaa tiro isku mid ah Niagara Falls .
Waxaa lagu xusay filimadan oo kale sida: "Waxay sheegaan" (1968), "Lunar Racer" (1979), "Mister Magu" (1997), "Goobaha Gods" (2007) iyo "Mission to Rio" (2009).
Sidee loo aadaa Iguazu Falls?
Laga soo bilaabo Buenos Aires ilaa Iguazu, waxaad qaadan kartaa gaari RN14 iyo RN12 (14 saacadood 22 daqiiqo) ama hawo (6 saacadood). Isku-duwaha goobta ayaa ah -25.694125 °, -54.437756 °.
Kaniisadda of Intercession of Blessed Virgin Mary
Noel-Kempff-Park National Park
Matxafka Santiago ee guriga Casa Casaayo
Caesikumka Homeopathy - caddaymaha isticmaalka
Haysashada ragga rageeya
Tallaal noocee ah ayay sameeyaan bisadaha iyo goorma?
Saaxiibayaal sir ah waxay ku qosleen 100 sano ka hor
Iskuubee kan leh baaquli fiican?
Tijaabi ardayda fasalka koowaad ka hor dugsiga
Rinjiga dibadda ee rinjiga
Saameynta sawirrada maskaxda caruurta
Qoorgooyaha: calaamadaha carruurta
Dareemkee ayaa ugu fiican?
Beerka iyo Scorpio - waafaqsanaanta dhammaan noocyada nolosha
Jakada caruurta ee caruurta
Duck foornada leh baji
Marka qufacayo, waxay ku xanuunaysaa laabta
Daahfaahinta buuxda ee 2014
Progesterone - tilmaamaha isticmaalka
Waxbarashada carruurta ee qoyska